Xisaabinta mugga ceelka, godadka cylindrical
Xisaabinta mugga ceelka
Miisaanka sawir 1: 0.5 1 1.5 2 3 4 5 6
dhexroor ugu sareeya D1
mugga Xisaabinta godka si fiican ama qaab cylindrical
D1 - ceel ballaciisu Sare
D2 - dhexroor ee hoose si fiican u
H - si qoto dheer
Intaa waxaa dheer, waxaad cayimi kartaa kharashka qodaya ceelasha iyo qiimaha ka saarida ciidda.
Waxaa jira saddex doorasho ee biyaha guryaha gaarka loo leeyahay. Waxaa suurto gal ah inay shidaal ka qodo ceel on iyaga u gaar ah, la Ijaarto xirfadlayaasha sababtan aawadeed, laakiin aad qodo ceel ay goobta. Dhammaan habkan leeyihiin faa'iidada iyo khasaaraha labada. Dad badan ayaa door bidaan in ay kuu diyaarin si fiican u ah oo ku saabsan goobta, sida waa raqiis ah, oo aad u isticmaali karaan in ka badan 50 sano oo nadiif ah dhismaha this sahlan badan ceelka. Ka sokow ceelasha qodaya uma baahna ogolaansho gaar ah. Si kastaba ha ahaatee, ku qodo ceel on your site, sameeyo qaar ka mid ah xisaabaha hordhac ah loo baahan yahay. Halkan waxa aad ka caawin doonaa barnaamijka xisaab our. All aad u baahan tahay in la sameeyo waa geli ee beeraha ku haboon oo si qoto dheer ceelka, ay dhexroor sare iyo ka hoose iyo kharashka qodaya meesha aad degan tahay, ka dibna barnaamijka xisaabin doonaa mugga ceelka iyo kharashka lagu qiyaasay uu Qodis.
Ugu horeyn in ceelasha Qodis madax banaan yahay doorashada ee meesha isaga. Waxaa muhiim ah in ay xirto gudahood gacan ka mid ah 50 mitir jirin kaydinta of digada iyo nijaasta kale oo laga yaabo in uu saameyn tayada biyaha. Ma loo baahan yahay si aad u sameysato si fiican u dhaw ka badan 5 mitir oo ka bilaabmaysay gurigii. Haddii kale waxaa jira halis ah oo waxyeello ku aasaaskii guriga sabab u leaching ciidda.
Waxa kale oo muhiim ah in la ogaado si qoto dheer ee ceelka. Waayo, si qoto dheer waxaa laga heli karaa qaabab mid ah meelaha ku xeeran, midkood god pre-qoday.
Ogsoonow in aanad qodo ceel waqti kasta oo sannadka ah. Waxa ugu fiican waa ku haboon muddo ka June si September. Wakhtigan, Aquifer ay yar tahay, taas oo macnaheedu yahay in aanad gelin doonaa qalad ka layers sare ee biyaha laga yaabaa in sii ka dib markii daadad guga.
Waxa ku xiga ee aad u baahan tahay inaad ka welwelin, tani waa sida aad u xoojin doonaa derbiga ceelka. Halkan waxaa ka jira fursado dhowr ah. jir alwaax Tani, la taaban karo mabda'a iyo leben. Mid kasta oo ka mid ah jidadka xoojinta waxay leedahay faa'iidooyin gaar ah. Tusaale ahaan, jir ugu jaban alwaax. Laakiin sidaas samaynaya uu yahay-gaaban. Uu muddo adeegga aan ka badnayn 15 sano. Intaa waxaa dheer, waa in la nadiifiyaa oo sanad walba daaalo ah. Sidoo kale inta lagu guda jiro Qodis ka mid ah si fiican ma loo xoojiyo derbiyada, kaas oo keena halista burburkii of dhulka.
la taaban karo mabda'a waa wanaagsan tahay in ka saaro baxaan biyo soo galaan ceelka. Laakiin sidoo kale sida aad u dheer ku samayn, oo waa inuu ku kici doono xaddi ka qaalisan. Halkan waxaad leedahay laba fursadood. Ama foomamka la taaban karo in la xoojiyo derbiyada naftaada ama iibsadaan. Ka hor inta aadan go'aansan sidii ay u sii wadi, fadlan ogow in warshadda ee giraanta la taaban karo xoojiyeen ka xoog badan kuwa aad adigu samayn kartaa. Laakiin, dabcan, oo waxay ku kici doona in ka badan.
Dhismaha ceelka leben u baahan tahay xirfado gaar ah iyo tababar joogto ah. Darbiyada baahan yihiin in la xoojiyaa, iyo leben ah in la dhiso aasaas. Laakiin, sida la taaban karo, leben ma ogola dhexgalka ah oo ceelka biyaha dusha galay.
Marka si fiican diyaar u yahay
Wax kasta oo si fiican u nooca qalabka aad doorato, waqti ka waqti u baahan tahay in la nadiifiyaa. Nadiifinta waa in la sameeyaa ugu yaraan laba jeer sannadkii oo dhowr jeer ka badan haddii si fiican u dhicin wax walxaha shisheeye. Waayo, ceelka nadiifinta way ka gareeyeen by biyo bamka. Markaas, waxaannu u soconnaa, waxaan ka dhigi doonaa habka daaweynta loo baahan yahay. Marka walxaha shisheeye, qufay, ciid iyo wasakh laga saaray salka iyo ilaa derbiyada ceelka, soo saari-dilista. Si arrintan loo sameeyo, derbiyada ceelka la isticmaalayo xaaqin a ama burushka waxeey dheer buufin bleach ah.
Marka si fiican waxaa ka buuxsamay biyo mar kale, waa in ay sidoo kale ku dar xal bleach qadarkuu of 150 mg halkii 1 litir oo biyo ah. Biyaha iyo sidoo kale ku kiciyeen, daboolay dabool leh, ceshan laba saacadood. biyaha waxaa ka dibna dib gareeyeen iyo sidoo kale maydhay biyo daahir ah. Habka lagu celceliyo ilaa ur chlorine baaba'aa.